भद्रगोलका पाँडेले भने धुर्मुस सुन्तलीले राजनीति गरेकै हुन्, जिग्री जंगिए - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
भद्रगोलका पाँडेले भने धुर्मुस सुन्तलीले राजनीति गरेकै हुन्, जिग्री जंगिए
धुर्मुस सुन्तलीले तेस्रो नमुना बस्तीको शिलान्यास गरेका छन् । शिलान्यास कार्यक्रममा केही हाँस्य कलाकार र मिडियाको उपस्थिति थियो । त्यहाँ उपस्थित कलारकार अर्जुन घिमिरे उर्फ पाँडेसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ । कुराकानीका क्रममा धुर्मुस सुन्तलीले समाज सेवाका नाममा राजनीति गरेको आरोप छ नि भनेर हामीले सोधेका थियौँ । यसको जबाफमा उनले यो सहि हो भने । धुर्मस सुन्तलीको पनि राजनीति त राननीति नै हो तर विकास निर्माणको राजनीति ।
कुनै नेताले जस्तो गाडी चढ्ने, भोट माग्ने, जनताको पैसाले मोज गर्ने राजनीति उहाँहरुको हैन । उहाँहरुको राजनीति भनेको जनताको पैसाले जनतालाई सुख दिने राजनीति हो । भन्नेले जे पनि भन्छ भन्नेको मुख कसैले पनि टाल्न सक्दैन । धुर्मुस सुन्तलीले एउटा राजनीतिमा लागेको मान्छेले पनि गर्न नसकेको काम गरिरहनु भएको छ । एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले कमेडि गर्दै हिड्न हुन्छ । नचाईदा बोल्न हुन्छ भने कमेडि कलाकारले राम्रो तरिकाले राजनीति गर्न हुँदैन ? उनले उल्टो प्रश्न गरे ।
धुर्मुस सुन्तलीको तेस्रो नमुना बस्तीको शिलान्यासमा पुगेका पाँडेसँगै जिग्रीलाई पनि हामीले सोही प्रश्न सोधेका थियौँ । कुमार कट्टेल उर्फ जिग्रीले मेरो दाजुभाउजुले राजनीति गरेको हो या काम गरेको हो । त्यो फिल्डमा आएर हेर्नुस, कुरा काटेर नबस्नुस भनेर जवाफ दिए । हेर्नुहोस् भिडियो
एक छोरीका पिता हुन् पाँडे, ब्युटिसियनसँग भयो प्रेम विवाह
हाँस्य कलाकार अर्जुन घिमिरे उर्फ पाँडे कुसल अभिनयका कारण परिचित छन् । पछिल्लो समय उनी सामाजिक कामका कारण पनि चर्चामा आउँछन् । तर उनको व..
बस्ती निर्माणका लागि जिग्री पाँडेलाई आर्थिक अभाव, तोकेको समयमा भएन सिनेमा घोषणा
सरकारी जागीर छाडेर भागेका पाँच सेलिब्रेटी
मिडिया हबले पैसा तिर्दा पनि किन आएन भद्रगोल ? यस्तो छ कारण
जिग्री र पाँडेको सिनेमामा धुमुर्स– सुन्तली हुने
Gufgaf / जन्मदिनमा पाँडेले छाडे काठमाण्डौँ : जन्मदिन विशेष - अर्जुन घिमिरे उर्फ पाँडेको आज जन्मदिन । असोज ९ गते आजकै दिन नुवाकोटको ओखर..
बढ्यो दिनेश काफ्लेको व्यस्तता, अक्टोवरमा कोरिया उड्दै
श्रीमानको रुपमा कुन्जनाले सीतारामलाई दिईन् १० मा २ नम्बर
धुर्मुसको जन्मदिनमा रौतहटमा ‘एकिकृत नमुना सन्तपुर बस्ती’ शिलान्यास
कमेडिका राजा , राजाराजेन्द्र पोखरेलको आज जन्मदिन
‘छक्का पञ्जा २’को देश दौडाहामा देखियो माग्नेको पुरानो रुप